ဗေဒင်ယတြာ Archives - Online Hartha
May 28, 2022 by Online Hartha
အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေစေရန်အစီရင် မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါအိမ်ခြံမြေကျောက်မျက်ရတနာအစရှိတဲ့ အကျိုးဆောင်များအနေဖြင့် ပွဲမတည့်မှုများပွဲလှန်သွားမှုများ ပွဲဖြတ်ခုတ်မှုများဖြစ်နေပါသလား ပင်ပန်းကျိုးမနပ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေပါသလား ပွဲတည့်ခါနီးမှအဖျက်ကြုံနေရမှုများအတွက်ဆရာယတြာအစီရင်တစ်ခုဒါနပြုပါရစေ သောကြာနေ့နံနက် ၆နာရီမှ၉နာရီအတွင်းမိမိအိမ်ကဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်၌အလယ်မှာငွေ၁၁၀၀ကျပ်တင်ပါ ထိုငွေပေါ်တွင်ရေဖြည့်ထားသောဖန်ခွက်တစ်ခွက်တင်ပါ ဖန်ခွက်ထဲမှရေထဲရေမွှေးဆွတ်ပန်းကန်ပြားပတ်ပတ်လည်လက်ဖက်၎ပုံ ပုံပေးပါရေမွှေးပုလင်းကိုထိုပန်းကန်ပြားပေါ်တင်ထားပါ ထိုပန်းကန်ပြားကိုကိုင်ပြီးမိမိလုပ်နေသောအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေမှုအတွက်လိုရာဆုတောင်းပါဗျာ ဤယတြာအစီရင်ကို၉ရက်တိတိပြုလုပ်ရပါ့မယ်နောက်နေ့များတွင်လည်းရေထဲရေမွှေးတစ်ကြိမ်ဆွတ်ပေးပြီးဆုတောင်းပါ…။ ၉ရက်ပြည့်ပြီးနောက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်လက်ဖက်နှင့်ရေကိုနီးစပ်ရာအပင်ကြီးအနီးစွန့်ပါငွေ၁၁၀၀ကျပ်ကိုမရှိဆင်းရဲသားအားလှူပေးပါ…။ ရေမွှေးကိုပွဲဆိုင်ဖို့သွားခါနီးမိမိ၏နှခမ်းစပ်မှာလည်းကောင်းဦးခေါင်းငယ်ထိပ်ဆွတ်ပြီးမှသွားပါ…။ ဤယတြာအစီရင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေအကျိုးတော်ဆောင်များ၏အခက်အခဲများအဆင်ပြေကြပါစေ…။ creditဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရှိကျော် Unicode Version အကြိုးဆောငျလုပျငနျးမြားအဆငျပွစေရေနျအစီရငျ မိတျဆှမြေားအားလုံးမင်ျဂလာပါအိမျခွံမွကြေောကျမကျြရတနာအစရှိတဲ့ အကြိုးဆောငျမြားအနဖွေငျ့ ပှဲမတညျ့မှုမြားပှဲလှနျသှားမှုမြား ပှဲဖွတျခုတျမှုမြားဖွဈနပေါသလား ပငျပနျးကြိုးမနပျနစေ့ဉျရကျဆကျဖွဈနပေါသလား ပှဲတညျ့ခါနီးမှအဖကျြကွုံနရေမှုမြားအတှကျဆရာယတွာအစီရငျတဈခုဒါနပွုပါရစေ သောကွာနနေံ့နကျ ၆နာရီမှ၉နာရီအတှငျးမိမိအိမျကဘုရားကြောငျးဆောငျပျေါတှငျ ပနျးကနျပွားတဈခပျြပျေါ၌အလယျမှာငှေ၁၁ဝဝကပျြတငျပါ ထိုငှပေျေါတှငျရဖွေညျ့ထားသောဖနျခှကျတဈခှကျတငျပါ ဖနျခှကျထဲမှရထေဲရမှေေးဆှတျပနျးကနျပွားပတျပတျလညျလကျဖကျ၎ပုံ ပုံပေးပါရမှေေးပုလငျးကိုထိုပနျးကနျပွားပျေါတငျထားပါ ထိုပနျးကနျပွားကိုကိုငျပွီးမိမိလုပျနသေောအကြိုးဆောငျလုပျငနျးအဆငျပွစေမှေုအတှကျလိုရာဆုတောငျးပါဗြာ ဤယတွာအစီရငျကို၉ရကျတိတိပွုလုပျရပါ့မယျနောကျနမြေ့ားတှငျလညျးရထေဲရမှေေးတဈကွိမျဆှတျပေးပွီးဆုတောငျးပါ…။ ၉ရကျပွညျ့ပွီးနောကျနနေံ့နကျပိုငျးတှငျလကျဖကျနှငျ့ရကေိုနီးစပျရာအပငျကွီးအနီးစှနျ့ပါငှေ၁၁ဝဝကပျြကိုမရှိဆငျးရဲသားအားလှူပေးပါ…။ ရမှေေးကိုပှဲဆိုငျဖို့သှားခါနီးမိမိ၏နှခမျးစပျမှာလညျးကောငျးဦးခေါငျးငယျထိပျဆှတျပွီးမှသှားပါ…။ ဤယတွာအစီရငျပွုလုပျခွငျးဖွငျ့မိတျဆှအေကြိုးတျောဆောငျမြား၏အခကျအခဲမြားအဆငျပွကွေပါစေ…။ creditဗဒေငျနှငျ့လက်ခဏာပညာရှိကြျော
Categories ဗေဒင်ယတြာ Leaveacomment
ငွေ ပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လုပ်ကြည့်ပါ
April 22, 2022 by Online Hartha
ငှေ ပွတျသှားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့) လုပျကွညျ့ပါ ငှေ ပွတျသှားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့) လိုကျကွညျ့ပါလား လကျတှအေ့စှမျးမို့ မဖတျအားသေးရှယျထားကွပါ ကွှပေနျးကနျနဲ့ဖွဈဖွဈ လငျဗနျးနဲ့ဖွဈဖွဈ ပေါငျမုနျ့ ၅ ခုထညျ့ ပေါငျမုနျ့ပျေါကို ကိတျမုနျ့၂ ခုတငျ.နို့ဆီ ဆမျး.ပွီးအိမျကဘုရားမှာ မုနျ့ဆှမျးလှူရငျး ငှကေိစ်စကို ဆုတောငျးရတာလေ။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ မနကျ ၁၀ : ၃၀ မိနဈကနေ နေ့၁၂ နာရီ မထိုးခငျကွားမှာ လှူရငျ ပိုတောငျမွနျ သေးသဗြ။ ကွာသပတေးနေ့ မနကျ ၇ : ၃၀ မိနဈ မထိုးခငျထပျပွီး လှူလို့ရသေးတယျ။ အဲဒါ တနင်ျလာနံ အခကျအခဲ မြိုးစုံ အတှကျ အဆငျပွစေမေယျ့ အလှူပေါ့ဗြာ။ ယုံကွညျရငျ နှဈကွိမျတော့ လှူပေါ့.မယုံကွညျရငျ မလှူ … Read more
အမှန်တကယ် ငွေဝင် ငွေရွှင်စေတဲ့ ယတြာ
April 10, 2022 by Online Hartha
အမှန်တကယ် ငွေဝင် ငွေရွှင်စေတဲ့ ယတြာ ဒီအဆောင်ယတြာကလေ ကိုယ့်အတွက်တော့ တော်တော်အကျိုးပေးတယ် ညီမတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလာပြတာနဲ့ လွယ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်တာ နောက်နေ့ ဘောပွဲ ၂ ပွဲဆက်တိုက်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့မနက်မှ ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ထပ်ထည့်လိုက်တာ စာအုပ်တိုက်က refund ပြန်ရတယ် လုပ်နည်းကလွယ်လွယ်လေး အိတ်အသေးလေးထဲ ပိုက်ဆံအသစ်တစ်ရွက်ရယ် ဆန်စေ့ (အနာ/အကျိုး မပါရ ) ၂၁ စေ့ရယ် ထည့်ပြီး အဲ့အိတ်လေးကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ထားရုံပဲ။ ပိုက်ဆံက တန်ဖိုးများလေ ကောင်းလေ ဒါမယ့်အသစ်တော့ဖြစ်ပါစေ…။ (၁၀၀ တန် ၂၀၀ တန်လည်းရပါတယ်. အသစ်လေးဖြစ်ရုံပဲ) ဆန်စေ့က ဘာဆန်အမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ်ရတယ် အနာ/အကျိုးမပါတဲ့ ဆန်အကောင်းဖြစ်ရင် ရပြီ။ ကိုယ်က ၁၀၀၀၀ တန်အရင်ထည့်ပြီးမှ လာပြတဲ့ ညီမက သူ့သူငယ်ချင်းက ၅၀၀၀ … Read more
ဆိုင်ရှင်တွေအတွက် နေ့သားအလိုက် ငွေဝင် စေရန် ဧည့်သည် ဝင်စေရန်
April 9, 2022 by Online Hartha
ဆိုင်သမားတွေအတွက် ငွေဝင်စေရန် ဧည့်သည်ဝင်စေရန် ငွေဝင်စေရန်ဧည့်သည်ဝင်စေရန်…… ငွေပေးမည့် ဧည့်သည်ကောင်းလာစေရန် မည်သူမဆို လုပ်လို့ရပါသည်…။ ပိုက်ဆံတန်ဖိုး (၉) ဂဏန်း ပေါ်မှာ… ဥပမာ။၉၀၀၊၉၀၀၀၊၁၈၀၀၀၊၂၇၀၀၀၊ စသဖြင့် (၉) ဂဏန်း ရသော ပိုက်ဆံတန်ဖိုး အရေအတွက်ပေါ်မှာ ထန်းလျှက်ခဲ (၁၁) ခဲ တင်ပြီး အိမ်ရှေ့ ၊ဆိုင်ရှေ့သို့မျက်နှာ မူပြီး ယပ်တောင် ဖြင့် အချက် (၁၀၈) ချက် (သို့မဟုတ်) လက်တစ်ညောင်း ယပ်ခတ်ပေးပါ။ ယပ်ခတ်နေရင်း… ငွေပေးမည့်သူလာစေရန် ဧည့်ကောင်းများလာစေရန် ဆုတောင်းပါ မုချရပါမည်။ မည်သည့်နေ့ မည်သည့်အချိန်မဆို လုပ်လို့ရပါတယ်။ အတိအကျလုပ်ချင်ရင်တော့…. တနလာင်ျ နေ့မနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာလုပ်ပါ။ ဆပွတ်နေ့သားသမီးကို လုပ်ခိုင်းရင် ပိုကောင်းပါသည်။ အဆင်မပြေရင် မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ ဆပွတ်နေ့သားသမီး … Read more
၂ ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ အတွက်
March 27, 2022 by Online Hartha
၂ ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် မနက်ဖြန်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေ ကံတက်ချင်တဲ့သူတွေ ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ဒီယတြာကိုလုပ်ပါ မနက် ၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ယတြာ ကော်ဖီ ၃ခွက်ကို ပူပူနွေးနွေးလေးဖျော်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ကပ်လှုပါ ဖယောင်းတိုင် ၃တိုင်ပါ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပေးပါ ဆုတောင်းရမှာပါ ယနေ့မှစပြီး ငွေဝင်ရပါလိုပါတယ် ထီပေါက်စေလိုတယ်ဟု အရှင်ဘုရားဟု ဆုတောင်းပါ တစ်ရက်ပဲလုပ်ရမှာပါ… နှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ကံတွေတက်ပြီး အောင်မြင်မှု တိုးတက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ် (၇)ရက်သားသမီးတွေ ဒီယတြာကိုတွေ့တော့ လိုက်လုပ်ကျတော့ မိမိလဲကုသိုလ်ရပါတယ် ငွေလဲပိုဝင်ပါတယ် ဆရာတစ်နေ့တစ်ခါ တစ်ပတ်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ ယတြာကို လိုက်လုပ်ကျတဲ့သူတွေအားလုံး ၂ပတ်အတွင်း ငွေဝင် ထီပေါက် စီးပွားတက်ကြပါစေလို့ဆရာက ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ။ Crd Unicode Version ၂ ပတျအတှငျး … Read more
၂ ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်
March 25, 2022 by Online Hartha
၂ ပတျအတှငျး ငှဝေငျခငျြတဲ့သူတှေ အရောငျးအဝယျကောငျးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ မနကျဖွနျကနေ ၂ပတျအတှငျး ငှဝေငျခငျြတဲ့သူတှေ အရောငျးအဝယျကောငျးခငျြတဲ့သူတှေ ကံတကျခငျြတဲ့သူတှေ ထီခြဲပေါကျခငျြတဲ့သူတှေ ဒီယတွာကိုလုပျပါ မနကျ ၆:၀၀ကနေ၉:၀၀ အတှငျးပွုလုပျရနျယတွာ ကျောဖီ ၃ခှကျကို ပူပူနှေးနှေးလေးဖြျောပွီး မွတျစှာဘုရားကို ကပျလှုပါ ဖယောငျးတိုငျ ၃တိုငျပါ မွတျစှာဘုရားကိုပူဇျောပေးပါ ဆုတောငျးရမှာပါ ယနမှေ့စပွီး ငှဝေငျရပါလိုပါတယျ ထီပေါကျစလေိုတယျဟု အရှငျဘုရားဟု ဆုတောငျးပါ တဈရကျပဲလုပျရမှာပါ နှဈပတျအတှငျး သိသိသာသာ ငှဝေငျလာပါလိမျ့မယျ ကံတှတေကျပွီး အောငျမွငျမှု တိုးတကျမှုတှရေလာပါလိမျ့မယျ 7ရကျသားသမီးတှေ ဒီယတွာကိုတှတေ့ော့ လိုကျလုပျကတြော့ မိမိလဲကုသိုလျရပါတယျ ငှလေဲပိုဝငျပါတယျ ဆရာတဈနတေ့ဈခါ တဈပတျတဈခါတငျပေးတဲ့ ယတွာကို လိုကျလုပျကတြဲ့သူတှအေားလုံး 2ပတျအတှငျး ငှဝေငျ ထီပေါကျ စီးပှားတကိကပြါစလေို့ဆရာက ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ Crd zawgyi ၂ ပတ်အတွင်း ငွေဝင်ချင်တဲ့သူတွေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် … Read more
ပစ္စည်းပျောက်တဲ့ အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ
March 22, 2022 by Online Hartha
ပစ္စည်းပျောက်တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့အခါ ၊ သူခိုး ခိုးခံရတဲ့အခါ ပြုလုပ်ရတဲ့ ယတြာနည်းတစ်ခု ဗဟုသုတအလို့ငှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ကြက်သွန်နီတစ်ဥကို ကန့်လန့် ထက်ခြမ်း ခြမ်းပါ။ အမြိတ်ထွက်တဲ့ဘက် အခြမ်းနဲ့ပစ္စည်းပျောက်တဲ့ (ပစ္စည်းထားတဲ့) နေရာကို ပွတ်ပေးပါ … ။ ပစ္စည်းပြန်ရဖို့ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ အောက်မှနေ ကြွေပန်းကန်ပြားခံပြီး ပွတ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမသိရင် ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်မှာပဲ ပွတ်ပြီးဆုတောင်းပါ …။ အမြစ်ရှိတဲ့ဘက် အခြမ်းကို ကြွေပန်းကန်ပြားပေါ်အခုလိုတင်လိုက်ပါ။ ကြွေပန်းကန်ပြားကို ပစ္စည်းပျောက်တဲ့နေရာမှာချပါ ။ အမြစ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပါ။ (နေရာမသိရင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ထွန်းပြီးဆုတောင်းပါ) ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် … ။ ဖယောင်းတိုင်အရေအတွက် အဆင်ပြေသလို ဉာဏ်ရှိသလိုထွန်းနိုင်ပါတယ် …. ။ ပျောက်နေသောပစ္စည်းများ အမြန်ပြန်ရနိုင်ကြပါစေ … Read more
ငွေ ပြတ်သွားတဲ့အခါ ဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့)လုပ်ကြည့်ပါ
March 21, 2022 by Online Hartha
ငွေ ပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လုပ်ကြည့်ပါ ငွေ ပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လိုက်ကြည့်ပါလား လက်တွေ့အစွမ်းမို့ မဖတ်အားသေးရှယ်ထားကြပါ ကြွေပန်းကန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လင်ဗန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်မုန့် ၅ ခုထည့် ပေါင်မုန့်ပေါ်ကို ကိတ်မုန့်၂ ခုတင်.နို့ဆီ ဆမ်း.ပြီးအိမ်ကဘုရားမှာ မုန့်ဆွမ်းလှူရင်း ငွေကိစ္စကို ဆုတောင်းရတာလေ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် ၁၀ : ၃၀ မိနစ်ကနေ နေ့၁၂ နာရီ မထိုးခင်ကြားမှာ လှူရင် ပိုတောင်မြန် သေးသဗျ။ ကြာသပတေးနေ့ မနက် ၇ : ၃၀ မိနစ် မထိုးခင်ထပ်ပြီး လှူလို့ရသေးတယ်။ အဲဒါ တနင်္လာနံ အခက်အခဲ မျိုးစုံ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အလှူပေါ့ဗျာ။ ယုံကြည်ရင် နှစ်ကြိမ်တော့ လှူပေါ့.မယုံကြည်ရင် မလှူ … Read more
ငွေမကုန်ပဲ တစ်လလုံး ဝင်ငွေကောင်းစေတဲ့ ယတြာ
March 17, 2022 by Online Hartha
ငွေဝင်များချင်သူများ အရောင်းအဝယ်ကောင်းချင်သူများ ထီပေါက်ချင်သူများ ငွေမြဲချင်သူများ ငွေများများဝင်ချင်သူများ ငွေအတွက်စိတ်သောကရောက်နေကျသူတွေအတွက် အရမ်းထိရောက်စေတဲ့ ယတြာပါ Shareပြီးသေချာလေးလုပ်ပါ မြတ်စွာဘုရားကို မနက်၇:၀၀ကနေ၉:၀၀အတွင်း Shark ဒါမှမဟုတ် ကျွဲရိုင်း ဒါမှမဟုတ် လစ်ပို မိမိအဆင်ပြေတဲ့ဟာ ၁ဘူးကိုကပ်လှုပေးပါ ၁ရက်နေ့မှာ ကပ်လှုရမှာပါ။ ၁ရက်ပဲ ကပ်လှုရမှာဖြစ်ပါတယ် စွန့်ပြီးရင် သောက်လို့လဲရပါတယ် Shareပြီးယတြာစလုပ်ပါ (၂၄)ပစ္စည်းအကျဉ်း 5ခေါက်ရွတ်ပေးပါ အချိန်ရရင် ၃မိနစ်တရားထိုင်ပေးပါ စိတ်ကလေးကြည်လင်သွားအောင်ပါ။Shareပြီးမှယတြာကိုစလုပ်ပါ ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို အအေး ကပ်လှုပါတယ် ကပ်လှုရသောစေသနာကြောင့် အေးမျှချင်းကိုရရှိပါစေ တပည့်တော် အခတ်အခဲတွေပြေပျောက်ပါစေ ငွေဝင်ပါစေ ထီပေါက်ပါစေ အရောင်းအဝယ်ကောင်းပါစေ ဟုဆုတောင်းပါ Shareပြီးယတြာလုပ်ပါ ဆရာအခုပေးတဲ့ယတြာက ၇ရက်သားသမီးတွေအဆင်ပြေအောင်ယတြာပေးတာဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်လဲ ဒီPostကိုShareပြီး ၇ ရက်သားသမီးတွေကို မျှဝေပေးပါ များများShareပြီး မျှဝေပေးရင် မိမိလဲ ငွေများများဝင်ပြီး ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ် … Read more
မှတျဖှယျမှတျရာ လက်ခဏာပညာ (အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးဆိုငျရာ လက်ခဏာမြား)
February 25, 2022 by Online Hartha
မှတျဖှယျမှတျရာ လက်ခဏာပညာ…(အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးဆိုငျရာ လက်ခဏာမြား) (A)# နှလုံးလမျးကွောငျးမှ ဉာဏျလမျးကွောငျးဆီသို့ ဦးတညျ၍ ဆငျးလာသောအရေးအကွောငျးငယျတဈခုမှာ မိမိမှ တဈဘကျသားအပျေါကို ခဈြခငျနှဈသကျစိတျဝငျစားမှုရှိခွငျးကို ဖျောပွပါတယျ။ ၎င်းငျးလမျးကွောငျးရှညျလြှငျရှညျသလောကျ မိမိမှ ခဈြခငျစှဲလမျးမှုပိုပါတယျ။ (B)# ဉာဏလြမြးကှောငြးထကမြှ နှလုံးလမြးကှောငြးဆီသို့ ဦးတညြ၍ တကလြာသောလမြးကှောငြးငယတြဈခုမှာ တဈဘကသြားမှ မိမိအပေါကြို ခစွခြငနြှဈသကစြိတဝြငစြားမှုရှိခှငြးကြို ဖောပြှပါတယြ။ ၎င်းငျးလမျးကွောငျးရှညျလြှငျရှညျသလောကျ တဈဘကျသားမှ ခဈြခငျစှဲလမျးမှု ပိုပါတယျ။ (C)#နှလုံးလမျးကွောငျးမှ ဆငျးလာသောလမျးငယျနဲ့ ဉာဏျလမျးကွောငျးမှ တကျလာသောလမျးကွောငျးငယျတို့ ပေါငျးဆုံခွငျး (သို့) ကြျောလှနျလာခွငျးမြိုးဖွဈနလြှေငျ ၎င်းငျးတဈယောကျနဲ့ အိမျထောငျကခြွငျး (သို့) သာမနသြမီးရညစြားအဆငြ့ထကကြွောလြှနကြာ ငှိစှနြးခှငြးတို့ကို ရညညြှနြးပါတယြ။ ၎င်းငျးငြးလမြးကှောငြးမွားဖှဈတညမြှု၊ လမြးကှောငြးမွားပှားမှုကိုလြိုကြ၍ ရညစြား/အိမထြောငဆြကြ မွား,မမွားကို သိရှိနိုငပြါတယြ။ (D)# နှလုံးလမျးကွောငျးမှ ဆငျးလာသောလမျးငယျတဈခုရှိပွီး ဉာဏျလမျးကွောငျးထကျမှတကျသော လမျးကွောငျးငယျမှာ မကှမေကှာနှဈခုဖွဈနပေါက ရညျစားနှဈယောကျကို တဈပွိုငျနကျထားခွငျး … Read more
© 2022 Online Hartha • Built with GeneratePress